ငါ့ကိုဘယ်တော့မှမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါ။ ဒါဟာ PMO ပဲ! (ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကကျွန်ုပ်ကိုဤသို့ပြုသည်။ ) - Your Brain On Porn
TL; DR: ငါကြောက်မက်ဘွယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ယခုငါဖြစ်၏။ အဆိုပါ NoFap စိန်ခေါ်မှုအပေါ်အရှုံးမပေးဘူး! အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့်ကိုမှန်ကန်များမှာ! တော်တော်စောစောပိုင်းနှစ်အရွယ်မှာကျွန်မ Asperger ရဲ့ Syndrome ရောဂါခဲ့သည်။
မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏, Fapstronauts! ယနေ့ဤရုန်းကန်နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်, ငါနောက်ဆုံးတော့ 30 ရက်ပေါင်းရောက်ရှိကြောင့်ငါဒီနေ့စူပါစိတ်လှုပ်ရှားခံစားနေပါတယ်!2နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်, ငါသာမယ့်ယခုငါ၏အ 30 နေ့ကအစီရင်ခံစာရေးထားပြီ! ဒီခဲ့မည်မျှခက်ခဲမယ့်, ဒါပေမယ့်လည်းကျိုးနပ်!
ငါကအားလုံးစတင်ခဲ့ပုံကိုပြောပြပါ့မယ်, ပြီးတော့ငါသညျအခြို့သောအကွံဉာဏျပေးပါလိမ့်မယ်။ (သင်ဖတ်နေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုပဲအကြံပေးချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖတ်ပြီးကျွန်မပြောပြမည်မဟုတ်မှအဆင်ပြေပါတယ်။ ။ ):)
2) ကျန်းမာရေး Get နှင့်ထဲကအလုပ်လုပ်!
3) ကိုဆက်သွယ်ပါ / r / NoFapWar !
4) အကျိုးကျေးဇူးများသူ့ဟာသူ NoFap မဟုတ်, ခရီးမှ လာ. , သတိရပါ!
ကြှနျတေျာ့ရောဂါ၏ထိုအချိန်တွင်ငါတကယ်သွားခဲ့ရာမှအဖြစ်သဲလွန်စရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ငါတစ်လတစ်ကြိမ်စိတ်ရောဂါသွားရောက်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ Asperger ရဲ့ဘာကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။
Asperger ရဲ့ Autism ရောင်စဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်, အခြေခံအားဖြင့်ဒါဟာဖြစ်ပေါ်စေသည်သောအဓိကပြဿနာကလူတို့အကြားလူမှုရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်နားလည်မှုတစ်ခုမရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Asperger ရဲ့နှင့်အတူ, ကိုယ့်အခြားလူလုပ်နေတာခဲ့သမျှသောပစ္စည်းပစ္စယ "ကိုကြည့်ပါ" လို့မရဘူး။ ငါသည်သင်တို့ကိုမကျြစိထဲမှာလူတွေကြည့်ဖို့ထင်ခဲ့ကြသည်မသိခဲ့ပါ။ ငါနှုတ်ဆက်ခြင်းအတွက်လူတွေကို "ဟဲလို" သင် "hi" လို့ပြောလို့ယူဆတယ်ခဲ့ကြသည်ကိုသိ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောစကားလုံးမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါက Asperger ရဲ့မယျ။ အခြားလူတိုင်းအတွက်ငါ့အဘို့ မှလွဲ. လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုအဘို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသိတယ်နဲ့တူရဲ့။ သူတို့ကဘာလုပ်ဖို့ကျွန်မကိုပြောပြရန်မေ့လျော့ကြ၏။ ထိုအကထွက်နေသေးတယ်ရဖို့ငါ့အဘို့အချိန်ကြာမြင့်စွာယူခဲ့ပါတယ်။
အလယ်တန်းကျောင်းမှာတော့ငါတကယ်ဘယ်သူ့ကိုမှစကားပြောမရခဲ့ပေ။ အရမ်းအနည်းငယ်မိတ်ဆွေများကရှိခဲ့ပါတယ်, ငါဆိုရက်စွဲများသွားဘူး။ ငါငါ့ကိုယ်ပိုင်မိသားစုအပြင်ဘက်မည်သူမဆိုဖို့ပြောနေတာပဲနိုငျထင်ရှိရာအမှတ်ဆည်းပူးခဲ့သည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဖို့သိုထား၏။
အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းစဉ်အတွင်းသွားခဲ့တာနောက်ထပ်အရာငါအများကြီး fapping ခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နေ့တိုင်းနီးပါး, ငါအခါတိုင်းငါတတျနိုငျသအတွက်ညစ်ညမ်းရဖို့နိုင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုပင်နောက်ထပ်အခြားလူစကားပြောငါ့အ drive ကိုလည်းယူသွား၏။ တကယ်တော့ကျွန်မတောင်အခြားလူများထံသို့ပြောနေတာမကြိုက်ကြဘူး! ငါကျေနပ်ဖြစ်ဖို့အခြားလူများမလိုအပ်ခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာမရှိပျော်စရာကြီးနှင့်ဖြည့်ဆည်းဘူး။ ငါလိုအပ်အားလုံး porn ဖြစ်ခဲ့သည်။
အကြှနျုပျ၏လူမှုရေးမှုနညျးငါ၏အညီ "ကြီးမားသောအစ်ကို" ၏ဝတ်လုံကိုတက်ယူရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့ထိုကဲ့သို့သောအမှတ်ရတယ်။ သူကအမြဲငါ့ကိုထက်ပိုပြီးအထွက်ရှိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတိုင်းမိန်းကလေးအမြဲငါ့ကိုသူ့ကိုမနှိမ်နင်းခဲ့သည်။ ထိုအခါငါအစဉ်အမြဲငါလုပ်နေတာခံရဖို့ထင်ခဲ့ရာအပေါ်အကြံဉာဏ်သူ့ကိုမေးရတယ်။ သူကအမြဲငါဒီတော့ "လိုက်တယ်" ခဲ့ဘာကြောင့်ဒါကြောင့်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ သူကမိတ်ဆွေကသူ့ကိုယ်ပိုင်စက်ဝိုင်းခဲ့, သူသည်အလွန်ငါ့ကိုချစ်သော်လည်း, အစဉ်မပြတ်ငါသူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခဲ့အခါတိုင်းငါ့ကိုလှည့်ပတ်ဖြစ်အနည်းငယ်ရှက်ခဲ့ပြောပြနိုင်ဘူး။ သူကလုံးလုံးလြားလြားငါ့ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ကြောင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ငါကိစ္စများအတွက်ကျောင်းကိုနှစ်ပေါင်းငါ၏အအလယ်တန်းကျောင်းနှစ်ပေါင်းဝါသနာ, ဒါမှမဟုတ်အမြင့်ဆုံးမရဖြစ်ခဲ့သည်။ အချိန်ပေါ်သွား, ငါလူတွေကိုပြောနေတာအကြောင်းကိုသာအနည်းငယ်ပိုကောင်းတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကအမြဲတမ်း, Self-သတိအလွန်အခြားသူများကိုလှည့်ပတ်အာရုံကြောနှင့်ကိုယ်အလိုအလျောက်ခြုံငုံမသေချာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကောလိပ်၌, ငါ့အစ်ကိုကသူမြင်ခဲ့ပြီးသောစကားပြောရန်တစ်ဦးကို TED အကြောင်းကိုပြောတယ်, မဟာ Porn စမ်းသပ်မှု, သူသည်စိန်ခေါ်မှု nofap အဆိုပါ 90 နေ့ကကြိုးစားပြီးသွားခဲ့တာ။ သူကရောက်စေဖို့ထင်ခဲ့သည်အကျိုးကျေးဇူးများတွေအားလုံးရဲ့ပြောတယ် (သူ porn နှင့်အတူသူ၏ကိုယ်ပိုင်ရုန်းကန်ခဲ့),
ကိုယ်အဘို့ငါကစောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါပြီးသားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုငါ့ Asperger ၏ထိပ်ပေါ်မှာ, ငါ့အဘို့ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့နိုင်တယ်လို့သံသယရှိခဲ့လေသည်။ အဆိုပါဗီဒီယို PMO မိန်းမနှင့်အပြန်အလှန်အဘို့သင့် drive ကို numbs ဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့အသက်ကို၏အစိတ်အပိုင်းခဲ့ကြသည်ဖော်ပြထားတယ်ဟာစွဲရောဂါလက္ခဏာတွေအားလုံး။ အဆိုပါဗီဒီယို NoFap အကြောင်းကိုစကားပြော, ဒါကြောင့်ငါကဒီ subreddit စာရင်းသွင်းနှင့်တစ်ဦးသွားလာရင်းပေးဖို့ဆုံးဖြတ်! ဒါကြောင့်လဲကျနော်တစ်ဦး Fapstronaut ဖြစ်လာခဲ့သည်, ဤအသိုင်းအဝိုင်း 100,000 subscriber များအားကျော်အထိကြီးထွားမျက်မြင်!
ယခုမှ Cut, ငါ့အသက်ကိုအခြားဦးတည်ချက်အတွက်လုံးဝသွားပြီ! ငါ macho ခံစား!
လူတွေကိုပြောနေတာပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။ ငါခဲပြောဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့သို့မဟုတ်ရယ်စရာအရာနှင့်ချီလာမယ့်အတွက်မဆိုအခက်အခဲရှိသည်, လူမှုရေး interaction ကတစ်ဦးလေပြေများမှာ! ပြည်သူ့သူတို့ကိုငါပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်မ Autism ရောင်စဉ်အပေါ်ဖြစ်ကြောင်းကိုထွက်ရှာတွေ့မှပင်အံ့သြသွားကြသည်။ ဘယ်သူမှသတိပေးချက်များ!
ဒါ့အပြင်ပဲမကြာသေးမီကကျွန်ုပ်၏အစ်ကိုနှင့်အတူစကားလက်ဆုံခံခဲ့ရသောအခါ, ထိုသူတို့ကျွန်မထင်ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုသူ့ကိုပြောပြခဲ့, သူ့ကိုစကားပြောခဲ့ကြတချို့မိန်းကလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ ME !!!
နှင့်, ဒီမှာကောလိပ်၌ငါတောင်မှအများဆုံးအံ့သြစရာအမျိုးသမီးတွေအချို့ကိုနှင့်အတူစုံတွဲတစ်တွဲရက်စွဲများသွားနိုင်ပါပြီ! (အားလုံးကတော့တစ်ချိန်တည်းမှာ)
NoFap အစဉ်အမြဲငါတွေ့ပြီအကြီးမြတ်ဆုံးအရာတစျခုဖွစျသညျ! သင်တို့ရှိသမျှသည်ငါဖြစ်၏နည်းတူ, ဒီအသိုင်းအဝိုင်းရှိသည်ဖို့ကံကောင်းများမှာ!
အဘယ်သူမျှမကယ့်ကို, ဒီအမှန်တကယ်အကြံဉာဏ်ကိုငါ၏အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်တယ်။ ငါ FAP တစ်ကယ့်ကိုဆိုးရွားတတ်ပြီးတဲ့အခါငါရေချိုးခန်းနှင့် pee ငါ့မြည်းကိုကျော်ဆွဲလျှင်, ထိုတတ်ပြီးကွယ်ပျောက်တတ်! စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ!
ဒီဖြစ်ပျက်အဘယ်ကြောင့်ငါအတိအကျမသိရပါဘူး။ ဒါဟာမျက်နှာဖုံးများငါ့ကို၏အာရုံခံစားမှုကွန်ပျူတာ screen ကိုဝက်အူဖို့ရှိခြင်း၏အာရုံခံစားမှုနှင့်အတူဆီးရန်ရှိခြင်း, ငါ့စိတ်ထဲငါ့ကိုဒါမကောင်းတဲ့ FAP ဖို့လိုလားနီးပါးလျှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ (အို! ဒါကငါကူညီမှုတစ်စုံတစ်ရာလုပ်နေတဲ့နာကျင်, လမ်းအသံ)
ဒါပေမယ့်ကိုက်ညီ။ သင်ရံဖန်ရံခါနံနက်သစ်သား get ဘယ်လိုသိ? ကောင်းပြီအခြားသင်သည်အဘယ်သို့နံနက်ယံ၌ပြုပါရန်ရှိသည်သလဲ? သင်အမှန်တကယ်မကောင်းတဲ့ဆီးရန်ရှိသည်။ သငျသညျဆီးပြီးနောက်နံနက်သစ်သားပျောက်တတ်၏။
ငါတကယ်တစ်ဦးလားရှိသည်နှင့်သောအခါ, တကယ်တကယ်တကယ်ငါမယ့်အစားဆီးလျှင်, တတ်ပြီးနီးပါးဥသုံပျောက်သွားအချို့ညစ်ညမ်းမှာကိုကြည့်ချင်တယ်။ ငါတခြားလူကဒီကြုံတွေ့ခဲ့ကြသိနိုင်အောင်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ပေး, သင် throbbing နေကြသည်အခါတိုင်းဆီး။
2) ကျန်းမာ Get ထွက်အလုပ်လုပ်!
သင်, လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကျန်းမာစားသုံးခြင်းထွက်အလုပ်လုပ်နှင့်မည်ကဲ့သို့သော NoFap အတွေ့အကြုံ၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်အကြောင်းပြောဆိုကြောင်းဤနေရာတွင်အပေါ်လူအပေါငျးတို့သိကြ၏။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းပြောပြကြသည်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ သူတို့လက်ျာဘက်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပဲ!
အခုတော့ကျွန်မနာရီနေ့တိုင်းအားကစားရုံသွားနှင့်အချို့သောအလေးအနက်သံညှစ်ထုတ်လိုက်သူတစ်ကောင်လေးမဟုတ်ဘူး။ မိဘများ, သူငယ်ချင်းများကို, ငါ့အစ်ကိုသည်နှင့်အညီ, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမြိုးသမီးမြား: ငါကလူငါကြည့်ရှုဘယ်လောက်ကောင်းငါ့ကိုပြောပြ left နှင့်ညာဘက်ရရှိပါသည်သေးကြီးမားကြွက်သားရှိလျက်နှင့်မပါဘူး။
အဆိုပါအရေးကြီးသောအရာသင်၏ကျန်းမာရေးမသိဖြစ်ရမည်။ မကြာခဏကအများဆုံးရေတွက်သောနည်းနည်းအမှုအရာပါပဲ။ အရမ်းကျန်းမာမစားကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းအလွန်အကျွံမစားကြဘူး, ငါအများအားဖြင့်ကိုယ့်ရေရှည်တည်တံ့မယ့်အစားကိုယ့်အရသာပါလိမ့်မည်ကိုသိသောအမှုအရာကိုစားကြိုးစားပါ။ သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သင်တို့အဘို့ကောင်းသောများမှာ!
ကိုယ့်အခြေခံလုပ်ပါ။ ရေအများကြီးသောက်ပါ။ အိပ်စက်ခြင်း၏ပဒေသာရယူပါ။ ထွက် သွား. နံနက်ယံ၌ 10 မိနစ်ကို run ။ တစ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူအပြေးမုန်း? ထွက် သွား. နံနက်ယံ၌ 10 မိနစ်လမ်းလျှောက်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအခြို့သောကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါ။ 10 မိနစ်တစ်ရက်ဘာမျှမထက် သာ. ကောင်း၏။ အလွန်အနည်းဆုံး, အစဉ်မပြတ်ဘာမျှမထက်ပိုကောင်းတဲ့အဘို့အသွား! တစ်ဦးကနည်းနည်းနေ့တိုင်း။ သငျသညျတိုးတက်မှုမြင်ရပါလိမ့်မည်!
3) ကို NoFap စစ် Join! / r / NoFapWar
ငါ့အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်တစ်ခါသာလအတွင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှစုံတွဲဖြစ်ပျက်ကြောင့် NoFap စစ်ပွဲ, စူပါစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစစ် Fapstronauts, Periwinkle (အပြာရောင်) နှင့်လိမ္မော်ရောင် (အနီ) ၏နှစ်သင်း၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့စစ်သားသည်သင်၏ညီအစ်ကိုချင်းဖြစ်ကြ၏, သင်စစ်ပွဲကာလအတွင်းပြန်သွားကြသည်ဆိုပါက, သင်ကဒဏ်ရာရသူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်သည်များစွာသောလကြာပြီးနောက်သည်အထိဆက်သွယ်ခြင်းမပြနိုင်သောကြောင့်, သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိသည်။ အဆိုပါသတ်မှတ်ထားသောအဆုံးသည့်ရက်စွဲမှာအနည်းဆုံးထိခိုက်သေဆုံးမှုနှင့်အတူအဖွဲ့ဆုရှင်ကြေငြာနေပါသည်!
ဤသူကားငါ၏ 3rd NoFap စစ်ဖြစ်တယ်, တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်စစ်တိုက်ခြင်းငှါရှိခြင်းသည်ငါ့ဆီသို့အမှန်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်။
ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိ Keep / r / NoFapWar ။ ကျနော်တို့ဇန်နဝါရီလ 1st အပေါ်စွန်းတိုင်အောင်အတွက်စေ့စပ်ဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး။ ထို့နောက်ငါ NFW V ကိုများအတွက်စစ်မြေပြင်ပေါ်တွင်သင်အားလုံး join ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်! ငါပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်သင်တို့ရှိသမျှကိုအားပေး, ထိုသို့သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကူညီပေးသည်ဆိုပါကကြည့်ပါ။
4) NoFap စစ်မှန်တဲ့အဖြေကိုမပေးပါ! (ထိုအသေး, ထိုသို့!)
ဤသူသည်ငါ NoFap အပေါ်အနည်းဆုံးစကားကိုနားထောငျလိုသောအရာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်စကားကိုနားထောငျဖို့ခဲယဉ်းသည်သမ္မာတရားဖြစ်ပါ၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
NoFap ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင် porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဖို့သင့်စွဲကျော်လွှားနိုင်ဖို့အထောက်အကူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်အမြဲလက်လှမ်းမမီထဲကဖြစ်ဟန်ကြောင်းလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်အမျိုးသမီးများကိုကြည့်ရှုရပ်တန့်ကူညီခြင်းနှင့်ကိုမှန်ကန်အံ့သြစရာကလူအဖြစ်ကသူတို့ကိုကြည့်ရှုစတင်ရန်ထင်နေသည်။
သို့သော် NoFap ဆေးလုံး "လူအပေါင်းတို့ကိုပျောက်ကင်းစေ" ဟုမှော်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်မှုတစ်ခုတံခါးပေါက်နဲ့တူရဲ့။ သင်က NoFap စိန်ခေါ်မှု, အခြားဘာမျှမလုပ်ပေး, အချို့မှော်ဖြစ်ပျက်မျှော်လင့်ပါတယ်လို့မရပါဘူး။ သငျသညျအခြို့ကတခြားအမှုတို့ကိုပြုရန်ရှိသည်။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့် NoFap ကနေမလာကြဘူး။ အဆိုပါအကျိုးခံစားခွင့် NoFap မှလာသော Self-တိုးတက်မှုမှလာကြ၏။
ကပြောသည်ခံရကြောင်း, ဒီ page ကိုပေးသွင်းပြီးကို 130,000 ကျော်ရှိပါတယ်တဲ့အကြောင်းပြချက်နေဆဲရှိသေး၏။ အဆိုပါ 90 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်. အင်အားကြီးတစ်ခုခုရှိပါသည်။ NoFap မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားတိုးတက်မှုမဆိုမျိုးလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ကြဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ဒါဟာဟော်မုန်း (pheromones, testosterone ဟော်မုန်း, etc) နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ငါ့ကို Beats ။ က NoFap ပိုကောင်းလုပ်ဖို့လှုံ့ဆျောစေသည်ကဘာလဲ?
အဘယ်သို့ငါပြောနိုင်သည်ဤသည်: NoFap မီ, ငါ့အသက်ကိုစို့။ အခုတော့အဲဒါမဟုတ်ပါဘူး။ တိုက်ဆိုင်မှု?
ငါ2နှစ်ပေါင်း NoFap လုပ်နေခဲ့လေပြီတကား2!!! 730 ရက်ပေါင်းထက်ပို! ကိုယ့်ကိုယနေ့နေ့က 30 တယ်! ငါ relapsing မတိုင်မီသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအပေါ်နေ့က 120 ဖို့လုပ်တဲ့သူတွေစကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ! သူတို့ပိုကောင်းတဲ့ငါ့ကိုထက်ဖြစ်ပါသလား ကိစ္စ freaking ပါဘူး! ငါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်ပေါင်း 30 စေသောကြောင့်, ကျွန်မအရာ၌နန်းထိုင်သည်အထိပဲကြိုးစားနေစောင့်ရှောက်ဖို့ခဲ့ကြတယ်!
သင်ဤမှာဘယ်တော့မှအရှုံးမပေး အကယ်. ကြိုးစားနေစောင့်ရှောက်လျှင်, သင်အောင်မြင်မည်!
ခိုင်မာတဲ့, Fapstronauts နေဖို့!
အကြှနျုပျ၏ Aquamarines, နှင့် Periwinkle ကြည်းတပ်၏ကျန်ဖို့ငါဆိုသည်ကား: အလိမ္မော်ရောင်ထိုးစစ်ကိုဖွိုဖကျြ! ကျနော်တို့တစ်ချိန်ကပိုဠာကိုအုပ်စိုးရသော!
LINK - နောက်ဆုံးတော့!!!2နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်ကျွန်မအိုင်တီပြုမိပါပြီ !!!